Herotra gilasy mampiseho ny endrika mifanohitra hita amin’ny sivana “4 Jona” ao Shina · Global Voices teny Malagasy
Gilasy miendrika fiara mifono vy mampahatsiaro ny famoretana tao Tiananmen
Voadika ny 13 Jona 2022 20:58 GMT
Vakio amin'ny teny Română , English
Pikantsary iray avy amin'ilay fandefasana nivantana nataon'i Li Jiaqi noraràna tao amin'ny Twitter, mpampiasa @GFWfrog
Nanomboka ny 3 Jona, taorian'ny nandefasany nivantana ilay lahatsariny nofafàn'ireo mpanivana ny tranonkala shinoa tao amin'ny Taobao, nanjavona tsy hita amin'ny sehatra media sôsialy rehetra i Austin Li Jiaqi, iray amin'ireo sangany amin'ny fitarihan-kevitra ao amin'ny media sôsialy shinoa.
Tsy dia natoky loatra ny fisian'ilay sivana ireo mpijery satria ilay lahatsary dia nampiseho an'i Li nanao doka tamim-pahatsorana ny fikarakaràna zavamamy iray misy herotra gilasy. Avy hatrany ilay fanivànana nivatravatra natao an'ilay fandefasana nivantana dia niteraka andiana fifanakalozan-dresaka tety anaty tambajotra rehefa niadian'ireo Shinoa hevitra momba izay anton'ilay resabe.
Nony farany, tonga saina ihany ireo mpijery hoe ilay zavamamy nanana endrika fiara mifono vy natolotra nandritra ilay fandaharana nivantana no nitarika tamin'ny fanesorana ilay lahatsary. Raha fikarakaràna zavamamy asiana herotra gilasy nomena endrika fiara mifono vy mahafatifaty no hitan'ny ankamaroan'ireo teratany shinoa, ireo mpanivana ny tranonkala nahita azy iny ho mety famongarana ireo filazàna momba ny famoretana tao Tiananmen tamin'ny 1989 ary dia tsy maintsy nesorina tsy ho anaty tambajotra.
Raha ny mahazatra dia sahobakaka ambody riana foana ireo mpanivana ny tranonkala shinoa rehefa manodidina ny fankalazana ny tsingerintaon'ny famoretana tao Tiananmen tamin'ny 4 Jona 1989 no resaka. Izay rehetra fitaovana ahitàna sarina labozia, sary milaza ny tantaran'ilay tranga, ireo tarehimarika toy ny “64,” “89,” ary ireo fomba firesaka sarontsaronana toy ny “May 35” (midika hoe May 31 + 4 andro”) dia bahanana.
Iray amin'ireo tena fanehoana ny herim-bahoaka tanaty hetsipanoherana mandala ny demaokrasia ny saripika iray “Tank man” ary ireo rehetra saripika mifandraika aminy dia notsaraina ho zava-mafampàna ara-pôlitika manodidina ny 4 Jona avokoa. Mazava be fa tsy afa-bela amin'izany ilay herotra gilasy manana endrika fiara mifono vy.
The greatest protest photos of all time were taken 33 years ago today. On June 5, 1989, six (not four) photographers captured a lone protester facing down a column of tanks near #TiananmenSquare. This version of the“Tank Man” photo was made by @StuartAFranklin for @TIME…🧵 pic.twitter.com/RLNMEFiqet
— Patrick Witty (@patrickwitty) June 5, 2022
Ireo saripikam-panoherana tena goavana indrindra nopihana 33 taona lasa izay. Ny 5 Jona 1989, enina (fa tsy efatra) no mpakasary nandrakitra olona tokana mpanohitra niatrika andiana fiara mifono vy teo akaikin'ny #TiananmenSquare (kianja Tiananmen). Ity dika iray amin'ny “Tank Man” ity dia nataon'i @StuartAFranklin ho an'ny @TIME…🧵 pic.twitter.com/RLNMEFiqet
Iza moa i Li Jiaqi?
Li dia iray sangany amin'ireo mpitarikevitra ao anaty media sôsialy ao Shina. Ao anatin'ny fandefasany mivantana ny fandaharany, teteziny sy anaovany fandrisihana daholo ireo karazana vokatra natao ho an'ny mpanjifa. Amin'izao fotoana izao izy dia manana mpanjohy mihoatra ny 30 tapitrisa ao amin'ny Weibo ary mihoatra ny 170 tapitrisa manerana ireo sehatra isankarazany.
Ny 7 Novambra 2021, nipoitra teo amin'ny China Central Television izy ary nahalafo kapoaka 120.000 tamin'ireo “pine nuts” (voanjo kesika) avy any Afghanistàna, tanatina fandaharana iray monja, izay napetraka hametrahana firahalahiana eo amin'i Shina sy ny governemanta Talibàna vaovao ao Afghanistàna.
Nahazo loka marobe ihany koa izy avy amin'ny Ligin'ny Tanora Kaominista ao Shina (CYLC) ho toy ny fàka tàhaka ho an'ireo tanora shinoa.
Toy ireo hafa mpitarikevitra ihany ao amin'ny media sôsialy, nitandrina fatratra i Li amin'ny fampitàna ireo kabary ôfisialy ary nisoroka ireo lohahevitra saropady tsy ho anatin'ireo lahatsary fandefany mivantana. Tamin'ny Martsa 2021, niditra nanatevina laharana ny Fampielezankevitra Fanohanana ny ladihazon'i Xinjiang, nataon'ny CYLC izy, izay antso iray hanaovana ankivy ireo marika tandrefana niato tsy nampiasa ny landihazo vokarina ao Xinjiang intsony.
Vokany, maro no nihevitra fa nikasa ny hanitsaka ny tsipika napetraky ny antoko i Li. Tena mety azo inoana hoe tsy tao an-tsainy ny fifandrohizan'ny fiara mifono vy amin'ny tantara shinoa amin'izao vaninandro izao, noho ny fahombiazan'ireo manamaphefana mpampihatra sivana. Saingy nanomboka teo dia nitondra fahasahiranana ho azy ny tsy fahalalàny. Tamin'ny asa nataony farany indrindra ho an'ny Radio Free Asia, i RebelPepper, Shinoa iray mpanao sariitatra pôlitika, dia nihanihany tamin'ilay tranga:
— 变态辣椒RebelPepper (@remonwangxt) June 9, 2022
Fiantraikan'ny “Streisand”, tahotra, ary ny hevitra mifanohitra anatin'ny sivana
Avy hatrany ilay fanjavonana tampok'i Li Jiaqi dia niteraka ny antsoina hoe “Fiantraikan'ny Streisand” satria ireo mpanjohy azy dia naniry hahafantatra izay nanjo ilay olona nahalefaka azy ireo. Ny sasany nandingana mihitsy ny tambajotra ao an-toerana mba hikarohany fanazavàna:
— irei (@ireimaki) June 6, 2022
Tena mampihomehy fatratra ity. Vao avy nahazo antso tamin'ny reniko aho izao, nilaza izy fa nanontanian'ny anabaviko (teraka tamin'ny 1990) mahakasika izay tsy azo resahana momba ny 4 Jona taorian'ny zava-nanjo an'i Li Jiaqi. Gaga ny reniko hoe tsy nahafantatra na inona na inona momba ny 4 Jona ranabaviko ary dia notantarainy fohifohy taminy ilay tranga manan-tantara. Tohina ilay anabavy keliko mavokely. Miombom-po amin'i Li aho, fa tena nanao zavatra goavana be izy. Raha mbola fampielezankevitra pôlitika nahomby, tsy nisy tahàka iny!
Niarahaba an'i Austin Li ny sasany, ho toy ny mpanabe malaza indrindra ho an'ny 4 Jona:
— 墙国蛙蛤蛤🐸（声援李佳琦！） (@GFWfrog) June 9, 2022
Afisy kidaladala ho an'ny tany tontolo reee izao!
Mba hisakanana ny “Fiantraikan'ny Streisand”, tsy afaka tadiavina efa nandritra ny herinandro ny anaran'i Austin Li, ary efa hatramin'ny 3 Jona ny kaontiny amin'ny media sôsialy no tsy nisy fanavaozana. Ny sasany efa niomana nialoha hoe ilay tranga dia mety hiteraka fanadihadiana lavidavitra kokoa ary mety ho voasazy amin'ny resaka heloka bevava mifamatotra amin'ny hetra izy, toy ireo olomalaza hafa tety anaty tambajotra.
Ilay dona ratsy be nateraky ny tsy fahalalàna ara-pôlitika dia niteraka sahotaka tety anivon'ny tambajotra sôsialy. @oshiwodediyi1 mpampiasa Twitter dia nilaza fa nanomboka nanome fampianarana ny tantara ho an'ireo mpiasa ao aminy ny orinasa iasàny mba hisorohana ny tsy hanaovan'izy ireo hadisoana tahaka izany:
— 哦是我的第一 (@oshiwodediyi1) June 5, 2022
Tena mihoatra ny takatry ny saina raha ny raharaha Li Jiaqi manontolo. Mba efa antitra ihany aho fa tena tsy nahafantatra zavatra momba ny 4 Jona hatreto. Lasa niha-henjana hatrany hatrany ireo fepetran'ny sivana tato anatin'ny taona vitsivitsy, ary tena miezaka fatratra ny tsirairay tsy handingana ny fetra. Nefa ankehitriny ny zavadehibe dia isika tsy manana fahalalàna. Vokany, nampiantso fivoriana maika ny orinasanay tamin'ny fampiasàna ny PowerPoint mba hampianarna anay ny tsy azo soratana anaty bokin-tantara. Nivontirika ny masonay.
Ny mpampiasa Twitter, @lmitgu, mahita fa ny fironana mankamin'ny fihazàna ara-pôlitika no fototry ny olana:
— limtddd (@lmitgu) June 4, 2022
Voaporofon'ny raharaha Li Jaiqi fa na iza na iza dia mety ho tafalatsaka ao anatin'ilay fihazàna ara-pôlitika avokoa. Raha misy olona te-hanimba anao, azony atao ny manely tsaho milaza fa nanala baraka an'i Shina ianao ary dia hihaza anao ireo olompirenena voasasa atidoha. Raha misy pôlitisiana mpanao kolikoly voarohirohy, dia voamarina ilay famoretana. Tia tanindrazana ny vahoaka shinoa, fa tsy ireo mpiray firenena aminy. Tsy misy na kely aza fahatokiana ara-kolontsaina na nasiônaly. Ny zavatra hitako dia ny fiverenan'ny Revôlisiôna ara-Kolontsaina.
Nomen'ireo Shinoa mpisera amin'ny aterineto anarana ilay tranga ho lasa zavamifanohitry ny raharaha Li Jiaqi na ny 4 Jona, ho entina manondro ny vokatra mifanohitra ateraky ny sivana:
— iPaul🇨🇦🇺🇦 (@iPaulCanada) June 6, 2022
Fifanoheran-javatra iray no avoitran'ny fanivànana an'i Li Jiaqi: raha misy olona iray te-hisintaka lavitra ireo lohahevitra mafampàna ara-pôlitika, dia tsy maintsy ianarany ireo rehetra lohahevitra voaràra.